San Htun's Diary: October 2013
ဂျော့တောင်းသွား တောလားဆိုတော့ ဘယ်ပြည်နယ် ဘယ်မြို့ ဘယ်တောတွေ လားနေပြန်ပြီလဲလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ။ ဒီစီပြည်နယ် ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်ကို လည်လည်သွားတာပါ။ စက်တင်ဘာလကုန်ခါနီး တခုသော စနေနေ့ကလဲရားနဲ့ အတူ တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကို ဗော်လန်တီယာလုပ်ဖို့စာရင်းပေးထားပါတယ်။ စနေနေ့ မို့ထင်ပါရဲ့ဒီစီမြို့ တော်ကြီးက ခြောက်ကပ်နေလိုက်တာ။ ကယ်ပီတယ်ကနေ မိုးနှုမတ်ကျောက်တိုင်အထိ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးကို ကယ်ပီတယ်မောလ်လို့ ခေါ်ပြီး ပွဲတော်တွေ၊ အားကစားပြိုင်ပွဲတွေ ကျင်းပလေ့ ရှိပါတယ်။ နေ့ လည် ၁၂ နာရီ ရီဂျက်စတာလုပ်တော့ ကဒ်လေး ထုတ်ပေးတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ခုံတွေအားလုံး စီပြီးသွားပြီ စားဖို့ ပဲ ကျန်တော့တယ် ရော့ ထမင်းဗူးတဲ့။ ဘာမှမလုပ်လိုက်ရတဲ့ ဗော်လန်တီယား) ။
လူတွေအုံနေလို့သွားစပ်စုတာ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့လူကြီးတယောက် စုတ်တံနဲ့စာရေးပေးနေတာ။ အလကားဆိုတာနဲ့အချစ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရေးပေးဖို့ရီကွတ်လုပ်လိုက်တယ်။ မှင်ကို စုတ်တံနဲ့ရေးတာ အတော်ခက်တယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ ကျွှန်မကို ရေးပေးတဲ့ ကလေးမလေးက ဆယ်နှစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။ တရုတ်ရိုးရာဝတ်စုံလေးနဲ့ချစ်စရာလေး။
မိုးနှုမတ်ကျောက်တိုင်ကနေ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အထိမ်းအမှတ်၊ ရီဖလန်းရှင်းရေကန်၊ လင်ကွန်းအထိမ်းအမှတ်တို့ ကို ဖြတ်ကျော်လို့ပတ်တိုးမတ်မြစ် ဘေးကလမ်းအတိုင်း လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ လမ်းလျှောက်ကြသူတွေ၊ စက်ဘီးစီးကြသူတွေ၊ ပတ်တိုးမတ်မြစ်ထဲမှာ သင်္ဘောစီးကြသူတွေ၊ ကနူးလှေလှော်ကြသူတွေ၊ မတ်တပ်ရပ်လှော်ကြသူတွေနဲ့စည်ကားပါတယ်။ ဂျွှန်ဖက်ကနေဒီ ပါဖောင့်မတ်အနုပညာစင်တာကို ကျော်ပြီးချိန် မောလို့မြစ်ကမ်းဘေးမှာ နားကြတယ်။ ကလေးမလေးတယောက်က ဂျင်းဂဲဘဲလ်သီချင်းကို တိုးတိုးလေး ညည်းဆိုပြီး ဘဲတွေကို အစာကျွှေးနေတယ်။
ပတ်တိုးမတ်မြစ်က ဒီစီနဲ့ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကို ခြားထားပြီး အလယ်မှာ သီဟိုဒိုရုစဗဲ့ကျွှန်း ရှိပါတယ်။ တဖက်ကမ်းက ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် အာလင်တန်ဖက်က တိုက်မြင့်မြင့်ကြီးကို မြင်ရတယ်။ ဂျော့တောင်းဝါတားဖရန့် ပန်းခြံမှာ ရေပန်းတွေနဲ့သာယာတယ်။ ကျွှန်မက ဂျော့တောင်းတက္ကသုိုလ်ကို မရောက်ဖူးဘူးလို့ရောက်တုန်းလေး သွားလည်ချင်တယ်။ ကလဲရားက ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်ထွက် မဟုတ်ပေမဲ့ ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်အားကစားခန်းမက ကောင်းလွန်းလို့အသင်းဝင်ထားပြီး အားကစားလာလုပ်၊ ရေလာကူးလေ့ ရှိပါတယ်။
တူးမြောင်းလေးကို ကျော်ဖြတ်တော့ မဆီမဆိုင် အီတလီက ဗင်းနစ်မြို့ လေးကို သတိရတယ်။ လမ်းမတန်းရောက်တော့ လား...လား လူတွေမှ ကြိတ်ကြိတ်တိုးနေလိုက်တာ ခြင်္သေ့ကျွှန်းက အော့ချက်လမ်းမအတိုင်း။ နာမည်ကြီးဆိုင်တွေ အကုန်ရှိတယ်။ ဆိုင်တွေကလည်း တထပ်တိုက် ရှေးဟောင်းလက်ရာတွေ။ ကလဲရားကြိုက်တဲ့ဂျေခရူး J.Crew ကျွှန်မကြိုက်တဲ့ ဘနနားရီပါ့ပလစ် Banana Republic ရဖဲလော်ရန် Ralph Lauren ဇာရာ Zara တွေ ဝင်ကြတော့ ဒစ်စကောင့်ဆိုတာ မတွေ့ တဲ့အပြင် ဈေးကကြီး ကြိုက်တာလည်းမတွေ့ ။
မနှစ်က ဒီဇင်ဘာ ခရစ်စမတ် ဝါရှင်တန်ဒီစီ Ronald Reagan Washington National Airport ကနေ ဆူနမ်တို့ ဆီ ရှယ်တယ်စီးတော့ ဒရိုင်ဘာအန်တီကြီးက ရဲတိုက်ကြီးကို ညွှန်ပြပြီး အဲဒါဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ် နာမည်ကြီးသလို ဈေးလည်းအရမ်းကြီးတယ်။ အဲဒီတဝိုက်က အိမ်ငှားခတွေက အရမ်းအရမ်းကို ဈေးကြီးတယ်တဲ့။ ရဲတိုက်ကြီးလို ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်ဆိုတာကြီးကို လှမ်းမြင်လိုက်ရကတည်းက ရောက်ဖူးချင်ခဲ့တာ။ ခုတော့ ရောက်ဖူးပြီ။
credit to www.georgetown.edu
၁၇၈၉ ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဂျော့တောင်းတက္ကသိုလ်ဟာ နိုင်ငံရဲ့ သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ကက်သလစ်တက္ကသိုလ်ဖြစ်သလို ကမ္ဘာအဆင့် ပညာရေး၊ သုသေတနလုပ်ငန်းတွေကို ဦးဆောင်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ပါ။ ပတ်တိုးမတ်မြစ်ကို အပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်ရသလို တောင်ကုန်းပေါ်မှာ တည်ထားတဲ့ တက္ကသိုလ်ကြီးက အင်မတန်မှ သာယာလှပသလို ကြီးကျယ်ခမ်းနားပါတယ်။ အထဲကိုတော့ မဝင်ဖြစ်တော့ဘူး။ အသင်းက ကန်ရတော့မဲ့အလှည့်ဆိုရင် အဲဒီအသင်းဖက်က ဘင်ခရာတီးဝိုင်းက တီးမှုတ်လိုက်၊ သီချင်းတွေ သံပြိုင်ဟစ်ကြွေးကြ၊ ချီယားလီဒါမိန်းကလေးတွေက ကလိုက်ကြနဲ့အတော်ပျော်ဖို့ ကောင်းသား။ ကျွှန်မကတော့ ကာထားတဲ့ ပိုက်ကွက်ထဲကို ကင်မရာထည့် Zoom နဲ့ အကြီးချဲ့ ပြီး ရိုက်ရတယ်။ ဂျော့တောင်းအနွေးထည်လေးတွေ ဝတ်ထားတဲ့ တရုတ်ကျောင်းသူလေးတွေ တွေ့ တယ်။
ကလဲရားက တရုတ်ပြည် တက္ကသိုလ်မှာလည်း ဘောလီဘော ကစားတယ်။ ဖီလာဒဲဗီးယားတက္ကသိုလ် တက်တော့လည်း ဘောလီဘော ကစားတယ်။ ခုလည်း တပတ်တကြိမ် ဘောလီဘော ကစားတယ်။ နင် တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ဘာကစားလဲမေးတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက တုပ်ဆီးထိုးတယ်၊ အာလူးကောက်တယ်၊ ကြိုးခုန်တယ်၊ ဆောင်းရာသီဆို ကြက်တောင်ရိုက်တယ်၊ လမ်းလျှောက်တယ်။ ခုနစ်တန်းရောက်တော့ စကပ်တလွှားလွှားနဲ့ကြိုးခုန်နေတာ မသင့်တော်လို့ဆရာမတွေက ကြိုးမခုန်ရလို့ပိတ်လိုက်ကတည်းက မဆော့တော့တာ။ ပြီးတော့ ငါတို့ တက္ကသိုလ်မှာ ဘာမှမရှိလို့ဘာမှမကစားဘူးဆိုလို့ကလဲရားက အံ့တွေသြလို့ ။
တံတားပေါ်ကနေ ပတ်တိုးမတ်မြစ်ကို ဖြတ်ကျော်ရင်ပဲ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် ရိုစလင်ကို ရောက်ပြီ။ တံတားပေါ်မှာ ကျွှန်မတို့ ကို ဖြတ်ကျော်သွားတဲ့အုပ်စုထဲက အန်ကယ်ကြီးတယောက်က သူ့ ဓာတ်ပုံတွေ တဖျပ်ဖျပ် ရိုက်ခိုင်းနေတာတွေ့ လို့ကျွှန်မက ပြုံးတော့ ကလဲရားက အံမယ် သူများကို ပြုံးမနေနဲ့ ။ နင်လည်း ဘာထူးလဲ အဲဒီအတိုင်း တဖျပ်ဖျပ် ရိုက်ခိုင်းလိုက် ရှုခင်းတွေကို ရိုက်လိုက်နဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲ။ တော်ကြာ ဟိုနေရာမှာ ရပ်လိုက် ဒီနေရာမှာ ရပ်လိုက်နဲ့ နင်နဲ့လမ်းလျှောက်ရတာ ခရီးမတွင်ဘူးလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။
ငါတို့ လမ်းလျှောက်လာတာ ၃ နာရီကျော်နေပြီ ရှုးတခါမှ မပေါက်ရသေးဘူး ဟို Marriot ဟိုတယ်မှာ ရှုးဝင်ပေါက်ရအောင်။ ဟမ်...ဝင်ပေါက်လို့ ရပါ့မလား။ ကလဲရားက ကောင်တာကို သွားပြီး ကျွှန်မသူငယ်ချင်းအတွက် ဘွတ်ကင်းကို ကျွှန်မခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ပေးထားတာ သူတို့ ချက်ကင်လာရင် သူတို့ ခရက်ဒစ်ကဒ်နဲ့ပေးလို့ ရတယ်မလား။ (ဟိုတယ်ကောင်တာ) ရပါတယ် မမ်။ လာ..ရှုးပေါက်လို့ ရပြီ။ ပိုင်သကွာ ကလဲရား..ရာ။
ရိုစလင်မြို့ ထဲတလျှောက် လမ်းတပတ်လျှောက်ပြီး ဗိုက်ဆာလာတော့ နာမည်ကြီး ဗီယက်နမ်ဆိုင် Pho 75 က ဖော်ကို မစားတော့ဘဲ Asia Cafe က နာမည်ကြီး အင်ဒိုနီးရှားအစားအစာ Nasi Uduk နာဆီအူထုတ် စားကြတယ် ကောင်းသား။ ခြင်္သေ့ကျွှန်းမှာတုန်းက ဖိလစ်ပို်င်တွေစုရပ် လပ်ကီးပါလဇာဆိုလား ဘာပါလာဇာပါလိမ့် နာမည်မေ့နေပြီ အဲဒီမှာ အာရမ်ပါရမ်ဆိုတဲ့ အင်ဒိုနီးရှားအစားအစာ ထမင်းကို ကြက်အကြွပ်ကြော်၊ အမဲအကြွပ်ကြော်၊ ကန်းစွန်းရွက်ပြုတ်၊ သခွားသီး၊ ငါးပိထောင်း အတော်စပ်စပ်နဲ့စားတာ အတော်ကောင်းတယ်။ ဟာဘားဖရန့် မှာ အင်ဒိုနီးရှားဆိုင် ဂါရုဒါဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လည်း မြန်မာပါးစပ်နဲ့ ကိုက်တယ် စားကောင်းတယ်။
စားပြီးတော့ ကလဲရားက ဒီစီကို ၂ နာရီ လမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်မယ်တဲ့။ ကလဲရားထက် အသက် ၂၀ လောက်ပိုငယ်တဲ့ ကျွှန်မကတော့ လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့လို့ရထားစီးပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်း) ။ NIH မှာ အလုပ်အသစ် ရသွားတဲ့ ကလဲရားနဲ့အလုပ်အသစ် မရသေးတဲ့ ကျွှန်မတို့အရင်လို ဖလမ်းဖလမ်း မထနိုင်တော့ပါဘူး။ ကလဲရားက ခေါက်လို့ ရတဲ့ စက်ဘီး ( ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၁၂ မှာ ကျွှန်မ စီးနေတဲ့ စက်ဘီး) ဝယ်ထားတဲ့အပြင် BMW SUV X3 ဝယ်ထားပြီမို့ကားမှာ စက်ဘီးတွေ တင်လို့ ရပြီ အားတဲ့တနေ့ Biking ထွက်မယ်၊ ရှေ့ လ တရုတ်ပြည် အလည်မသွားမှီ ဖီလာဒဲဗီးယားကို သွားဖြစ်ခဲ့ရင် လိုက်ခဲ့။ အဲဒီမှာ လွတ်လပ်ရေးကြေငြာခေါင်းလောင်း ၊ သမိုင်းဝင်နေရာတွေကို လည်ပတ်လို့ ရတယ်လို့ ခေါ်ထားပေမဲ့ ရေစက်ရှိရင် ဆုံတွေ့ ဦးမှာပေါ့။ သွားဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဖီလာဒဲဗီးယားသွား တောလား ရေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၉ ၊ ၂၀၁၃။
Thadingyut, the seventh month of the Myanmar calendar, marks the end of lent. Monsoon is on the way out and the skies are clearing. Sunny days are here to stay.
ဝါတွင်း၏ အဆုံးသတ်မှာ မြန်မာပြက္ခဒိန်၏ ခုနစ်လမြောက်ဖြစ်သော သီတင်းကျွှတ် ဖြစ်သည်။ မုတ်သုန်သည် ဆုတ်ခွာနေပြီး ကောင်းကင်သည် ကြည်လင်လာသည်။ နေသာသောနေ့ များ လာတော့မည်။
The austerity, sobriety and restraint of the lenten season together with the damp murky gloom of the monsoon - all these have given away to fun and festivities. With the ban on weddings lifted, there is the scent of eugenia leaves and lilies in the air. The soft breeze whispers the music of flutes and harps.
ခြိုးခြံခြွေတာ နေထိုင်ခြင်း၊ အရက်မသောက်ခြင်း စသည့် ဝါတွင်းကာလ ကန့် သတ်ချက်များသည် စွတ်စိုမှောင်မည်းသော မုတ်သုန်မိုးနှင့်အတူ အဝေးသို့ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ပွဲတော်များ လာတော့မည်။ ဝါတွင်းကာလ မင်္ဂလာဆောင်ခြင်း တားမြစ်ထားခြင်းကို လှစ်ဟလိုက်သည်နှင့် ယူဂျီးနီးယားသစ်ရွက်နှင့် လီလီပန်း ရနံ့ များသည် လေတွင် သင်းပျံ့ နေတော့သည်။ ညင်သာသော လေပြေလေးက ပလွေသံ၊ စောင်းသံများကို တိုးတိတ်စွာ ဆောင်ကြဉ်းလာသည်။
The three day lights festival, namely the day before the full moon, the full moon day and the day after, will be those of music, dances and fun. Illuminations are there to celebrate the anniversary of the Buddha's return from the celestial abode, where he had spent the lent teaching the gods above His Law.
လပြည့်အကြိုနေ့ ၊ လပြည့်နေ့ ၊ လပြည့်ကျော်နေ့ထိုသုံးရက် ကျင်းပသော မီးထွန်းပွဲတော်တွင် အတီးအမှုတ် အကအခုန်များ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ရှိသည်။ တဝါတွင်းလုံး နတ်ပြည်တွင် တရားဓမ္မများကို သင်ကြားပြသပြီး လူ့ ပြည်သို့ပြန်လာသော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို ကြိုဆိုသောအားဖြင့် မီးထွန်းပွဲတော်ကို ကျင်းပကြသည်။
ထိုနတ်များထဲက နတ်တပါးမှာ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ မိခင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး နတ်ဖြစ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ သီတင်းကျွှတ်လ၏ လပြည့်နေ့ တွင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည် လူ့ ပြည်သို့ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နှင့် တပည့်သာဝကများကို နတ်များက အလုံးအရင်းဖြင့် လိုက်ပါခြံရံကြပြီး ကြယ်လမ်းကို ဖန်းဆင်းခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နှင့် တပည့်သာဝကများကို ကြိုဆိုရန်ကမ္ဘာမြေတွင်ရှိသော လူသားများက အိမ်များ၊ လမ်းများကို မီးထွန်းညှိကြသည်။
Although the anniversary is on the full moon day, the Myanmar way of celebrating such an event is to haveafestival on the eve, to welcome the day and the actual day and then the day after to giveagrand send-off. So, the three festival days instead of one. The more The merrier.
အထိမ်းအမှတ်သည် လပြည့်နေ့ ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာတို့ပွဲတော်ကို ကျင်းပလေ့ရှိသည့်အတိုင်း ကြိုဆိုသော အကြိုနေ့ ၊ တကယ့်ပွဲတော်နေ့ ၊ ပွဲတော်ကို နှုတ်ဆက်ခွဲခွာသောနေ့ ဟုဆိုကာ ဆင်နွှဲကြသည်။ ထို့ ကြောင့် ပွဲတော်သည် တစ်ရက်အစား သုံးရက်ဖြစ်သည်။ ရက်ကြာလေ ပိုပျော်ဖို့ ကောင်းလေ။
Streets, houses and public buildings are illuminated and festooned with coloured electric bulbs. One feature of the festival in small towns and villages is see-mee lighting; small earthen bowls are filled with sessamum oil andapiece of cotton is soaked in each bow and lighted.
လမ်းများ၊ အိမ်များနှင့် ပြည်သူ့ အဆောက်အဦးများကို ရောင်စုံကာလာ လျှပ်စီးမီးသီးများဖြင့် အလှဆင်သည်။ မြို့ ငယ်များနှင့် ကျေးလက်တောရွာများတွင် မြေခွက်ငယ်ကလေးများကို နှမ်းဆီဖြည့်ပြီး ဝါဂွမ်းမီးစစိမ်ထားသော ဆီမီးကို ထွန်းညှိကြသည်။
These lighted oil bowls are placed on the terraces of pagodas. The lights last longer than candles and the little tongues of flame quivering in the breeze land an uncanny beauty to the scene stepped in silvery moonlights. Such lights are sometimes seen on the pagoda in Yangon city.
ထိုမီးထွန်းညှိထားသော ဆီမီးခွက်များကို ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်တွင် ထားလေ့ရှိသည်။ ထိုဆီမီးသည် ဖယောင်းတိုင်ထက် ကြာရှည်အထွန်းခံပြီး လေတိုက်သော်လည်း ငြိမ်းမသွားဘဲ ငွေလရောင်အောက်တွင် ထူးဆန်းသော လှပမူကို ပေးသည်။ ထိုဆီမီးရောင်များကို ရန်ကုန်မြို့ဘုရားပေါ်တွင် တခါတရံ မြင်တွေ့ နိုင်သည်။
The scene of the Buddha's descent from the celestial regions is often recreated in the streets or pagoda precincts, all done up in papier mache and poster paintings and of course, lights. The festival is often called the Tawadaintha feast: Tawadaintha, being the name of the celestial abode where the Buddha spent the lenten season.
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် နတ်ပြည်မှ ဆင်းသက်လာပုံကို စက္ကူကပ်များ၊ ပိုစတာ ပန်းချီကားများ၊ မီးလုံးများဖြင့် လမ်းများ၊ ဘုရားပရဝုဏ်များတွင် ဆင်ယင်ထားတတ်သည်။ ထိုပွဲတော်ကို တာဝတိံသာပွဲတော်ဟု ခေါ်တတ်သည်။ တာဝတိံသာဆိုသည် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဝါဆိုခဲ့သော နတ်ပြည်၏အမည် ဖြစ်သည်။
Thadingyut is not onlyaseason of festivals and rejoicings, but alsoatime for remembering those to whom we owe respect and gratitude. The Buddha's visit to the celestial regions was to teach the great Truth he had found through rigorous striving for many many lives, to his own mother. It wasagesture of gratitude, and example for all to follow . The Buddha made the greatest gift of all, namely the gift of Dhamma (the Law) that would deliver her from Suffering once and for all.
သီတင်းကျွှတ်သည် ပွဲတော်များဖြင့် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ရာသီသာမက ကျွနု်ပ်တို့ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူ၊ လေးစားထိုက်သူများကို သတိရသော အခါသမယလည်း ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် နတ်ပြည်သို့လာရောက်ရခြင်းသည် ဘဝပေါင်းများစွာ ပါရမီဖြည့်ဆည်းပြီးမှ တွေ့ ရှိခဲ့သော သစ္စာလေးပါး မြတ်တရားကို မိခင်ဖြစ်သူအား သင်ကြားပေးဖို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျေးဇူးတရား၏ အမှတ်သင်္ကေတဖြစ်ပြီး ကျွနု်ပ်တို့ အားလုံး နမူနာယူသင့်သည်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည် တဘဝသာမက သံသရာတလျှောက် ခံစားရမည့် ဆင်းရဲခြင်းကို ကင်းဝေစေမည့် အမွန်မြတ်ဆုံးသော ဓမ္မလက်ဆောင်မွန်ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓအဆုံးအမအရ ဗုဒ္ဓ၊ ဓမ္ဓ၊ သံဃာ၊ မိဘနှင့် ဆရာ ရတနာငါးပါး ရှိသည်။ သီတင်းကျွှတ်ကာလတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများ မိဘ၊ ဆရာသမား၊ သက်ကြီးဆွေမျိုများနှင့် သူငယ်ချင်းများထံ သွားရောက်ကန်တော့ကြသည်။
လမ်းထဲ၊ ရပ်ကွက်ထဲမှ သက်ကြီးများ လက်ဆောင်ရရှိခြင်း ရပ်ရွာထဲရှိ လူငယ်များမှ ကန်တော့ခြင်းသည် အစဉ်အလာဖြစ်သည်။ တခါတရံ စုပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း သက်ကြီးများထံသို့သီးသန့် သွားရောက် ကန်တော့ခြင်းကို မတားမြစ်ပါ။ ဤသို့ ဖြင့် ချစ်ခင်ရင်းနှီးစေသည်။
On the third day of the festival, people go round paying calls. It is 'open house' for many homes. Older people have light refreshments ready for the young visitors. They give away sweets and small change to children. Young people bring small gifts like candles, fruits and cakes, but it is not compulsory. Paying respects is accomplished by the act of kadaw, genuflection.
ပွဲတော်၏ တတိယမြောက်နေ့ တွင် လူများသည် သွားရောက်လည်ပတ်ကြသည်။ အိမ်အများစုကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်း မရှိဘဲ သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်။ လူကြီးများသည် လာရောက်လည်ပတ်သူ လူငယ်များအတွက် အချိုရည်များ ပြင်ဆင်ထားသည်။ သူတို့ သည် သကြားလုံးများ၊ အကြွေအနည်းငယ်ကို ကလေးများကို ပေးကြသည်။ လူငယ်များသည် ဖယောင်းတိုင်၊ သစ်သီး၊ ကိတ်မုန့် ကဲ့သို့ သော လက်ဆောင်လေးများကို ယူဆောင်လာတတ်ကြသည်။ သို့ သော် ထိုလက်ဆောင်များ မယူမဖြစ် ယူလာရမည်ဟု သတ်မှတ်မထားပါ။ ကန်တော့ဖြင့်လည်း အလေးအမြတ်ထားရာ ရောက်ပါသည်။
ကန်တော့ဟူသော စကားလုံးသည် မြန်မာလူနေမှုဘဝတွင် နေ့ စဉ်သုံးစကားလုံး ဖြစ်သည်။ မယဉ်ကျေးသော စကားလုံး ပြောရတော့မည်ဆိုလျှင် ကန်တော့ဟု ဆိုတတ်ကြသည်။ ကန်တော့ဆိုသည်မှာ တစုံတယောက်ကို မတော်တဆ တိုက်မိ၍သော်လည်းကောင်း၊ တဦးတယောက်၏ ခြေထောက်ကို တက်နင်းမိသော အခါတွင်လည်းကောင်း တောင်းပန်စကားဆိုရာတွင် သုံးသောစကားလုံး ဖြစ်သည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် ဆောရီးဖြင့် ဆင်သော်ငြား စိတ်ထဲကပါသော ခံစားမှုဖြင့် ဖြစ်သည်။
ဖုန်သပ်ပေးတာမျိုးကဲ့သို့ တစုံတယောက် ဆံပင်ကို ထိဖို့ လိုအပ်သောအခါ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ကိုယ့်ထက် မကြီးစေကာမူ ကန်တော့ဟု အရင်မပြောဘဲ လုပ်ပေးလေ့မရှိပါ။
The custom of doing the act of kadaw is rooted in the Buddhist acceptance of the samsara, the round of rebirths, begin born and reborn; all beings, humans and others go round the cycle, meeting on another in amicable or hostile relationships. Consequently, among people meeting one another in this present existence there would be love and kindness as there would be hate and enmity as well. There might be wrongful actions committed consciously or unwittingly to one another throughout the unending journey of samsara.
ကန်တော့ခြင်း အလေ့အထသည် အကြိမ်တဖန်ဖန် မွေးဖွားခြင်း သံသရာကို လက်ခံသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များထံတွင် ခိုင်မာမြဲမြံအမြစ်တွယ်နေသည်။ သံသရာခရီးသွားနေကြသော သက်ရှိအားလုံး ချစ်ခင်ခြင်း၊ မနှစ်လိုခြင်းများဖြင့် ဆုံတွေ့ ကြသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့် လက်ရှိဘဝတွင် ဆုံတွေ့ ကြရာဝယ် တယောက်နှင့်တယောက် ချစ်ခင်ကျွှမ်းဝင်ခြင်း ဖြစ်သလို မုန်းတီးခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မဆုံးသော သံသရာခရီးတလျှောက် မရည်ရွယ်ဘဲနှင့်သော်လည်းကောင်း ရည်စူး၍သော်လည်းကောင်း ကျူးလွန်ခဲ့သော မှားယွင်းသော အပြုအမှုများ ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
When Buddhists do the act of kadaw to anyone, their parents, teachers or elders, they not only pay respects asagesture of gratitude, but they also ask forgiveness for any wrongful action they might have done in this life and many many lives before.
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ဆရာသမား၊ မိဘ၊ လူကြီးသူမများကို ကန်တော့ကြသောအခါ ကျေးဇူးတင်ခြင်းအားဖြင့် လေးစားသမူ ပြုကြခြင်းသာမက အရင်ဘဝများစွာကတည်းက ပြုလုပ်ခဲ့သော မှားယွင်းသော အပြုအမူများကို ခွင့်လွှတ်ဖို့တောင်းပန်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
The elders, even as they accept the kadaw from young people, ask forgiveness in their turn for any wrongful action or hurt they themselves might have been guilty of. This reciprocal action is called the 'erasing of the slate', which is the same as 'burying the hatchet'. After this act of 'erasing the slate', friends and kinsmen can start witha'clean slate' with nothing but love and kindness.
လူငယ်များ၏ ကန်တော့ခြင်းကို လက်ခံလျှင်တောင်မှ လူကြီးသူမများသည် သူတို့ ၏ မှားယွင်းသော အပြုအမူများ၊ အပြစ်ဖြစ်စေသော ထိခိုက်မှုများရှိက တဖန်ခွင့်လွှတ်ဖို့ပြောဆိုသည်။ ထိုအခြင်းအရာကို မြူမှုန်မျှမကျန် ခြေဖျက်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။ မြူမှုန်မျှမကျန် ခြေဖျက်ပြီးသောအခါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှလွဲ၍ တခြားဘာမှ မရှိဘဲနှင့် သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင်များ စတင်နိုင်သည်။
Paying respects or kadaw or ceremonies are organized and held in schools. Paying respects to teachers, one of the Five Revered Ones, is still practiced. Buddhists parable illustrate the good influence of teachers on their students, even though the latter might have become ruling kings.
ကျောင်းများတွင် ဆရာကန်တော့ပွဲအခမ်းအနားများကို ကျင်းပကြသည်။ ရတနာငါးပါးတွင် တပါးဖြစ်သော ဆရာသမားများကို ကန်တော့ခြင်းကို ယနေ့ ထက်တိုင် ကျင့်သုံးသည်။ တပည့်သည် လက်ရှိအုပ်စိုးနေသော ဘုရင်ဖြစ်နေလျှင်တောင် ဆရာများသည် တပည့်များပေါ်တွင် ကောင်းကောင်း လွှမ်းမိုးနေခြင်းကို ဗုဒ္ဓဝင်ပုံပြင်များက ဖော်ပြနေသည်။
Once,ashort time after the demise of the Buddha, the kings of India assembled to claim their share of the Buddha's relics. It wasagoodly company of crowned heads, each attended by the Four Elements War, namely, infantry, cavalry, chariots and war elephants. Swords and spears and shields burned in the sunlight as the caparisoned steeds and elephants dug their heels impatiently, as they waited for action.
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ပရိတ်နိဗ္ဗာန်ပြုသောအခါ အိန္ဒိယဘုရင်များသည် ဗုဒ္ဓဓာတ်တော်များကို ခွဲဝေဖို့စုရုံးရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ စစ်ပွဲအင်္ဂါလေးရပ်ဖြစ်သော ခြေလျင်တပ်၊ မြင်းတပ်၊ ရထားလုံးတပ်နှင့် ဆင်တပ်များ ကိုယ်စီခြံရံကာ ရောက်လာကြသော သရဖူဆောင်း ဘုရင်များ ဖြစ်သည်။ ဓားများ၊ လှံများနှင့် ချပ်ဝတ်တန်ဆာများသည် နေရောင်တွင် တဖိတ်ဖိတ် တောက်ပနေပြီး ကကြိုးတန်ဆာ ဆင်ယင်ထားသော မြင်းများ၊ ဆင်များသည် စစ်ပွဲစတင်ဖို့စောင့်နေချိန် စိတ်မရှည်စွာဖြင့် သူတို့ ခွာများကို တူးနေကြသည်။
Then came the dispute over who should get how much of the relics. Tempers rose and angry voices rang though the air and the steel clanged as the warriors made ready their weapons. Horses neighed and reared, elephants let forth andafearful trumpeting. A havoc of blood and destruction was imminent.
ထို့ နောက် ဓာတ်တော်ကို ဘယ်သူက ဘယ်လောက် ရသင့်သည်ဖြင့် အငြင်းပွားကြပါလေရော။ ဒေါသများ မြှင့်တက်လာကာ စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုး အော်ဟစ်သံများ လေတွင် ပျံ့ လွင့်နေသည်။ စစ်သားများသည် သူတို့ လက်နက်များကို အဆင်သင့်ဖြစ်နေစေဖို့ပြင်ဆင်ကြသည်။ မြင်းများက ဟီကြကာ နောက်သို့ ဆုတ်သည်။ ဆင်များက ရှေ့ တိုးကာ ကြောက်မယ်ဖွယ်ကောင်းအောင် အော်မြည်ကြသည်။ သွေးချောင်းစီးတော့မည်မှာ မဝေးတော့။
At the crucial moment, an authoritative voice rang out above the din: "Silence, all of you !" The kings turned their heads towards the voice they knew so well, the voice that had dared to command them. There stood Dona the brahman, who was their teacher, who had taught them the princely arts, in their student days.
အလွန်အရေးကြီးသော ထိုအချိန် စိတ်ရှုပ်ဖွယ်ကောင်းသော ဆူညံသံများ ကျော်လွှား၍ သြဇာအာဏာပြည့်ဝသောအသံ ပေါ်ထွက်လာသည်။ "အားလုံး တိတ်ကြ "။ အသံလာရာဆီသို့ဘုရင်များ လှည့်ကြည့်သောအခါ သူတို့ အား အမိန့် ပေးရဲသော အသံကို သူတို့ ကောင်းကောင်း သိကြသည်။ ရပ်နေသူမှာ သူတို့ ကျောင်းသားဘဝတုန်းက မင်းသားများတတ်အပ်သော ပညာများကို သင်ကြားပေးခဲ့သည့် သူတို့ ၏ဆရာ ဒိုနာပုဏ္ဏား ဖြစ်သည်။
ဘုရင်များ သူတို့ ဆရာဖြစ်သူကို ဦးခေါင်းညွှတ် အရိုအသေပေးပြီး ငြိမ်သက်သွားခဲ့သည်။ ဘုရင်များသည် ဒိုနာပုဏ္ဏားပေးသော သူတို့ ဝေစု ဓာတ်တော်များကို မကျေနပ်သောစကား တခွန်းမျှ မဆိုဘဲ လက်ခံကာ အဝေးသို့ငြိမ်းချမ်းစွာ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
So this is the spirit of Thadingyut season...paying respects to those to whom respect is due and remembering those to whom we owe gratitude.
ရိုသေထိုက်သူများကို ကန်တော့ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ရမည့်သူများကို သတိရခြင်းသည် သီတင်းကျွှတ်လ၏ စိတ်ဓာတ် ဖြစ်သည်။
The five lotuses are fragrant.
Bright lights burn.
At the top of the golden Palace Mountain
Myinmou lights blaze.
Season of lights.
three times in reverence.
The traditional ceremory of
Homage to the Aged
is held through the land.
(ဒီကဗျာကိုတော့ ဘာသာမပြန်တတ်ဘူး :)
Dr. Khin Muang Win
Very few people know that her real name is Ma Khin Mya. Her close relatives and friends call her by her real name . Young people call her Ma Ma Mya or Aunty Mya. Older people call her Ma Khin Mya. But to most people she was known under her pen name, 'Khin Myo Chit'.
တချို့ ကသာ သူမနာမည်ရင်း မခင်မြဆိုသည်ကို သိကြသည်။ သူမ၏ ဆွေမျိုးရင်းချာနှင့် သူငယ်ချင်းများက သူမနာမည်ရင်းဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သည်။ လူငယ်များက သူမကို မမမြ (သို့ မဟုတ်) အန်တီမြဟု ခေါ်ဝေါ်သည်။ လူကြီးများက မခင်မြဟု ခေါ်ဝေါ်သည်။ သို့ သော် အများစုက သူမ၏ ကလောင်နာမည် ခင်မျိုးချစ်ဟုသာ သိကြသည်။
She was born at the time when people generally had low expectations of women, when no parent would hear ofayoung respectable lady enteringaprofession, andahumanitarian education may be permitted, but only to be to write B.A under one's name and make expressions on people. "Whatapity she'sagirl." that's what she always heard people saying all the time.
အမျိုးသမီးများကို နိမ့်ချသော၊ မိန်းမငယ်လေးများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ခြင်း၊ ပညာသင်ကြားခြင်းကို တားမြစ်ထားသည့် ခေတ်ကာလတွင် သူမကို မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမ ဘီအေဘွဲ့ ရသော လူအများက အထင်ကြီးကြသည်။ မိန်းကလေးဖြစ်နေတာ နာသကွာ ဟူသော စကားကိုသာ သူမ တချိန်လုံး ကြားခဲ့ရသည်။
Her grandmother had beenamaid of honor at the court of King Mindon. Many times she recounted to her the events leading to the mass execution of King Thibaw's royal relatives by the Queen Suphayalatt. "It'sablot on our history." she used to say. She then related to her how the great warrior princes like the Prince Kanaung, the Thonsaire Minthagyi (literally translated the great Prince Thirty, so named because he could climp upawall of thirty yards in height using his bear hands and feet) and many others were executed during an internal intrigue. "We lost all the great warrior princes, so that when the British marched to the capital city of Upper Myanmar, there was not even one person to throwastone at the invaders."
သူမ၏အဘွားသည် မင်းတုန်းမင်း၏ ဂုဏ်ထူးဆောင် အပျိုတော်ဖြစ်သည်။ မိဘုရား စုဖုရားလတ်က သီပေါမင်း၏ တော်ဝင်မိသားစုဝင်များကို သုတ်သင်ပစ်သည့်အကြောင်းများကို သူမ အကြိမ်များစွာ ပြောပြတတ်သည်။ သူမက အဲဒါဟာ ငါတို့ သမိုင်းမှာ အမည်းစက်တွင်တာပဲဟု ပြောလေ့ရှိသည်။ နန်းတက်ချိန်တွင် သုတ်သင်ခံရသော ကနောင်မင်းသား၊ သုံးဆယ်မင်းသားကြီး ( အတောင်သုံးဆယ် မြင့်သောနံရံကို သူ့ ခြေထောက်၊ လက်ချည်းသက်သက်ဖြင့် တက်ရောက်နိုင်သောကြောင်း သုံးဆယ်မင်းသားဟု အမည်တွင်သူ) ၊ အပေါင်းအပါများနှင့် သူမ ဆက်စပ်နေသည်။ "ငါတို့ထက်မြက်တဲ့မင်းသားအားလုံးကို ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗြိတိသျှတွေ အထက်မြန်မာပြည်မြို့ တော်ကို ချီတက်သိမ်းပိုက်တော့ ကျူးကျော်လာသူတွေကို ကျောက်ခဲနဲ့ ပစ်တဲ့သူတောင် မရှိဘူး။"
She asked, "Do you mean to say, grandma, that if these warrior princes was there. Upper Myanmar would not have fallen under the British Rule?" "No," said her grandmother. "We would still lose the war, for, at that time, no one could stop the rising of the British Empire. But, at least "The Battle of Upper Burma" could have earnedaplace in the annals of war like Hannibal's fight against Rome, or King Arthur's fight against the Saxons, or King Harold's fight against the invading Normans."
"အဲ့ဒီမင်းသားတွေသာ ရှိနေသေးရင် အထက်မြန်မာပြည် ဗြိတိသျှလက်အောက်ကို ကျရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလုို့ဆိုချင်တာလား အဘွား"ဟု သူမက မေးသည်။ "မဟုတ်ဘူး"ဟု အဘွားက ဖြေသည်။ "ငါတို့စစ်ရှုံးမှာပဲ။ အဲဒီအချိန်တုန်းက အင်အားကြီးတဲ့ ဗြိတိသျှအင်ပါယာကို ဘယ်သူမှ မရပ်တန့် နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အနည်းဆုံးတော့ ရောမကိုခုခံတဲ့ ဟန်နီဘယ်တိုက်ပွဲ၊ ဆက်စွန်တွေကို ခုခံတဲ့ ဘုရင်အာသာရဲ့ တိုက်ပွဲ၊ ကျူးကျော်လာတဲ့ နော်မန်တွေကို တိုက်ထုတ်တဲ့ ဘုရင်ဟာနိုးရဲ့တိုက်ပွဲတွေလို အထက်မြန်မာပြည်တိုက်ပွဲဟာလည်း သမိုင်းဝင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ "
Her literary career began in 1932, when she translatedapoem of Sir Walter Scott and sent it to the Yangon University magazine. But she didn't put her name, being kind of shy to do that. The poem was about Patriotism, and when it was published, the editor put the pen name - Khin Myo Chit ( meaning 'lady who loves her country' or 'Miss patriot').
ဆာဝေါ့တာစကော့၏ကဗျာကို ဘာသာပြန်ပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မဂ္ဂဇင်းထံသို့ပို့ ခြင်းဖြင့် ၁၉၃၂ တွင် သူမ၏စာပေခရီး စတင်ခဲ့သည်။ သို့ သော် ရှက်ရွှံ့ သောကြောင့် သူမနာမည် မထည့်ခဲ့။ ထိုကဗျာသည် မျိုးချစ်စိတ်အကြောင်းကို ဖွဲ့ ဆိုထားသောကဗျာ ဖြစ်သည်။ ထိုကဗျာ ပုံနှိပ်သောအခါ အယ်ဒီတာက ခင်မျိုးချစ်ဟူသော ကလောင်နာမည် ပေးခဲ့သည်။
That was how she made here debut in the literary field, and earned her pen name. But all was not well at home. With her father's obstructiveness and her mother's disapproval of 'clever girls', things got from bad to worse. She was not allowed to do any writing in peace. Her mother scolded her more and more. Her father threatened to burn her papers. She had to hide them and do her writing when everyone was in bed.
ထိုသို့ ဖြင့် စာပေနယ်သို့သူမ စတင်ခြေချခဲ့သည်။ သို့ သော် အိမ်မှာတော့ အဆင်မပြေလှ။ ဖခင်ဖြစ်သူ၏ အပြင်းအထန် ဆန့် ကျင်မှု၊ တော်သောမိန်းကလေးဆိုသည်ကို လက်မခံသော မိခင်ကြာင့် အခြေအနေသည် ဆိုးနေရာမှ ပိုဆိုးလာခဲ့သည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာ စာရေးသားဖို့သူမကို ခွင့်မပြုခဲ့။ သူမမိခင်သည် သူမကို တိုး၍သာ ဆူခဲ့သည်။ သူမဖခင်သည် စာမူများကို မီးရှို့ ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
အိမ်ရှိလူကုန် အိပ်သည့်အချိန်မှသာ စာရေးသားခြင်းဖြင့် သူတို့ ကို ရှောင်ပုန်းရသည်။
I shall not dwell too much on the story of her unhappy childhood and her escape from the tyranny of her father. It could have made something torn from the pages ofaDickens novel and could have earned heranick - name like 'Female David Copperfield'.
မပျော်ရွှင်သော သူမ၏ ငယ်ဘဝ၊ ဖခင်၏ ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှ လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားခြင်းများကို သူမ လွမ်းဆွေးတသမနေ။ ထိုအရာများက ဒစ်ကင်းဝထ္ထုတွင် မျက်ရည်ကျစေတတ်သော အကြောင်းအရာများလို ဖြစ်စေခဲ့ပြီး နာမည်ပြောင် အမျိုးသမီးဒေးဗစ်ကော်ပါဖီးအမည်ကို ရရှိစေခဲ့သည်။
Regarding her meeting with my father, U Khin Maung Latt (1915 - 1996) whom she referred to as 'Ko Latt', she wrote in her autobiography, as follows:-
"He was the boy next door. He had left college, an undergraduate, not being able to continue his studies because of the decline in family fortunes. He was havingashort lull at home while looking forajob.
ကျွနု်ပ်ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်လတ် (သူမက ကိုလတ်ဟု ခေါ်တတ်သော) နှင့် သူမ ဆုံတွေ့ ရပုံကို သူမ၏ ကိုယ်တိုင်ရေးအထ္ထုပတ္တိစာအုပ်တွင် ဤသို့ ရေးသားခဲ့သည်။ သူက အိမ်ဘေးက ကောင်လေးတယောက်။ သူ့ အိမ်စီးပွားရေး ကျဆင်းလာသောကြောင့် ကျောင်းဆက်လက် မတက်နိုင်တော့ဘဲ ဘွဲ့ မရမှီ ကျောင်းမှထွက်ခွာခဲ့ရသည်။ အလုပ်ရှာနေချိန် အိမ်တွင် အေးအေးလူလူ သူ ရှိနေခဲ့သည်။
He wasavoracious reader and we shared the same interests in books. I read the books he recommended and he returned the compliment. We read 'Little Women' one of my favorite books and he called me teasingly 'Jo'. We hadafine time talking of books. It seemed that we had launched onalong and timeless talk which could lead to one thing -alife - long alliance."
သူသည် စာဖတ်အားကောင်းသူတယောက်ဖြစ်ပြီး စာအုပ်များပေါ်တွင် ကျွနု်ပ်တို့စိတ်ဝင်စားမူ တူညီသည်။ သူညွှန်းဆိုသော စာအုပ်များကို ကျွန်မက ဖတ်သည်။ သူက လေးလေးစားစား မှတ်ချက်ပေးသည်။ ကျွန်မ၏အနှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်တအုပ်ဖြစ်သော မိန်းမငယ်လေးများ စာအုပ်ကို ကျွန်မတို့ ဖတ်ကြသည်။ သူက ကျွန်မကို ဂျိုးဟု နောက်ပြောင်ခေါ်တတ်သည်။ ကျွှန်မတို့စာအုပ်အကြောင်း ဆွေးနွေးသည့် အချိန်ကောင်းများ ရှိခဲ့သည်။ ထိုရှည်လျားအဆုံးမသတ်နိုင်သော ဆွေးနွေးခြင်းများကပင် တဘဝတာ မဟာမိတ် ဖြစ်စေခဲ့သည်။
Regarding her political involvements of 1937 and afterwards, she wrote:-
"Had this even tenor of our way gone on forafew months or so, Ko Latt and I might have slipped quietly into married life. My rosy dreams of the future during the interval ofafew months before our marriage turned out to beanight - mare if stormy incidents. It was the fate of the country that swept most of our dreams away. Byacruel ticket of fate, we became part of that mighty tidal wave which we were butatiny ripple."
၁၉၃၇ နိုင်ငံရေးပါဝင်လာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ ရေးသားခဲ့သည်မှာ
လအနည်းငယ် ကြာပြီးသောအခါ ကိုလတ်နှင့် ကျွန်မ လက်ထပ်ခဲ့သည်။ အိမ်ထောင်မပြုမှီ လအနည်းငယ်က ကြိုတင်စိတ်ကူးထားခဲ့သော စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်များသည် မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သောည အိမ်မက်ဆိုးတခု ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ စိတ်ကူးအိမ်မက်များကို တိုက်ချသွားသော နိုင်ငံ၏ ကံကြမ္မာဆိုးပင် ဖြစ်သည်။ ကံအကြောင်းမလှစွာဖြင့် ကျွန်မတို့ သည် ခွန်အားကြီးသော ဒီရေလှိုင်းမှ သေးငယ်သော ရေမြုပ်လေးများသာ ဖြစ်သည်။
She recounted the part she played in the demonstration of 1938 as follows;
"Three girls and I happened to be in the front line right after the standard bearers. It wasarude shock when we found ourselves confronted by baton weilding policemen, some mounted on horseback. All ofasudden, likeasequence onacinema screen, everything was in pools of blood. As I tried to pick them up, blows fell on me."
၁၉၃၉ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ ပြန်ပြောင်းပြောပြသည်မှာ
မိန်းကလေးသုံးယောက်နှင့် ကျွန်မ ရပ်နေတာက အတားအဆီးတွေရဲ့ပထမဆုံးလိုင်း။ အကာအကွယ်အပြည့်အစုံ ဝတ်ထားတဲ့ ရဲသားတွေ တချို့ ဆို မြင်းစီးလို့သူတို့ တွေရဲ့တားဆီးပိတ်ဆို့ တာ ခံရတော့ ထိတ်လန့် သွားတယ်။ အားလုံး ရုတ်တရက် ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း အရာအားလုံး သွေးတွေစွန်းလို့ ။ သူတို့ ကို ကောက်ကိုင်ဖို့ကျွန်မ ကြိုးစားပေမဲ့ လေကို ဖမ်းဆုပ်မိသလို။
မုန်တိုင်းထန်သော ဗြိတိသျှခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းချိန် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သော ဦးနု၊ သခင်သန်းထွန်း၊ သခင်ဘဟိန်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါက်တာဘမော်၊ ဦးကျော်ငြိမ်း၊ ဦးနေဝင်း၊ တခြားခေါင်းဆာင်များနှင့် ပျော်ရွှင်စရာ၊ ဝမ်းနည်းစရာအချိန်များကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသည်။
Also in her autobiography, she recountedadifficult phase of her life in the following way:-
"Now, I have come to one of the most difficult chapters of my life, for it was then my misadventures strayed into the realms of faith and religion. I was prejudiced against meditation or any religion practice which I took to be only for people who had nothing better to do or those who wanted to put on airs of holiness or those who had no courage to face life,...I thought."
The story of how her meeting with two monks changed her out-look and made her regain her faith in Buddhism cannot be told here, for that alnoe would have madeatreatise on Buddhism.
သူမ၏ ကိုယ်တိုင်ရေးအထ္ထုပတ္တိတွင် သူမဘဝ၏ အခက်အခဲဆုံး အစိတ်အပိုင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ပြောင်းပြောပြခဲ့သည်။
အခု ကျွန်မဘဝ၏ အခက်ခဲဆုံး ဘဝစာမျက်နှာများထဲက တချို့ ကတော့ ဘာသာရေး ယူဆချက်တွေ လွဲချော်နေတာပါ။ တရားထိုင်ခြင်း၊ တခြားဘာသာရေးကျင့်သုံးမှုတွေကို ကျွန်မက ဘာမှအလုပ် လုပ်စရာမရှိတဲ့သူတွေ၊ မြင့်မြတ်တယ်လို့အသံကောင်းဟစ်ချင်နေသူတွေ၊ ဘဝကို ရင်ဆိုင်ဖို့သတ္တိမရှိသူတွေ လုပ်တဲ့အလုပ်လို့တဖက်သတ် တွေးခဲ့ဖူးတယ်။
ဆရာတော်နှစ်ပါးနှင့်တွေ့ ပြီးသည့်နောက် သူမ၏ အမြင်ပြောင်းလဲပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ပြန်လည်သက်ဝင်ယုံကြည်စေခဲ့သည့်အကြောင်းသည် ဘာသာရေးဆန်နေသည့်အတွက်ကြောင့် ဤနေရာတွင် ကျွနု်ပ် မဖော်ပြတော့ပါ။
She becameamother-in-law in 1967,agrandmother of twins,aboy andagirl, in 1968. In an interview withawriter, Alex Wood in 1970, she said, "I am proud of beingagood grandmother and housekeeper, but I have never let this interfere with any of my cultural interests. I am glad that I rediscovered the art of Burmese 'Zatpwe' (a king ofamixture of play, concert and opera ) inatime to stop me from becoming an interfering mum-in-law and an over doddering granny. Friends rubbed their hands when the twins were born and said it would be the end of my freedom. But of course, it wasn't. I'm organizing myself better and writing more than before."
၁၉၆၇ တွင် သူမသည် ယောက္ခမ ၁၉၆၈ တွင် မိန်းကလေးနှင့် ယောက်ျားလေး အမြွှာနှစ်ယောက်၏ အဘွား ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၀ စာရေးဆရာ အဲလက်စ်ဝုဒ်နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ကျွန်မက အဘွားကောင်း၊ အိမ်ရှင်မကောင်းတယောက် ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆိုင်တဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေတော့ ဘယ်တော့မှ မရှိခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာဇာတ်ပွဲအနုပညာကုို ကျွန်မရှာဖွေတွေ့ ရှိတဲ့အတွက် ကျေနပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ အဲဒါက ကျွန်မကို ချုပ်ခြယ်စွတ်ဖက်လွန်းတဲ့ ယောက္ခမ၊ အဘွား မဖြစ်အောင် တားဆီးခဲ့လို့ ပါပဲ။ အမြွှာမွှေးတော့ သူငယ်ချင်းတွေက ရှင့်လွတ်လပ်မှုတွေ ကုန်ဆုံးပြီလို့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ပြီး ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါတွေ လုံးဝမှားတယ်ရှင့်။ ကျွန်မက အရင်ကထက်တောင် စာတွေပိုရေးလာနိုင်လို့ လေ။
1932 : Patriotism (apoem that earned her pen name)
1936 : College Girl (anovelette for serialization in "The Sun"adaily paper.)
1955 : 13 Carat Diamond ( short story published in "The Guardian magazine, later included in "50 Great Oriental Stories" in Bantam Classics.
1963 to 1968 : Heroes of Old Burma
: Quest for Peace (an autobiography)
(Both serialized in "The Working Peoples" Daily.)
1970 : Her Infinite Variety
(a prize-winning short story in the 'Horizon' magazine short story competition)
: The Four Puppets
(included in "Folk Tales of Asia", UNESCO)
: Anawrahta of Burma
(publication of 'Heroes of Old Burma', which was later re-printed under the titles,
'Anawrahta' and 'King Among Men'.)
1976 : Colorful Burma
(a practical and poetic guide for the visitors who wants something better than a
tourist view of Burma, later reprinted under the title 'Colourful Myanmar'.)
1977 : Flowers and Festivals Round the Burmese Year
(a short history of Kyaikhtiyo Pagoda, published in the Asia Magazine.)
1981 : A Pagoda Where Fairy Tale Characters Come to Life
(A tale-like description of Mai La Mu Pagoda in the outskirts of Yangon, published
in the Asia Magazine.)
1984 : A Wonderland of Burmese Legends
(published by the Tamarind Press in Bangkok, later reprinted in Burma under the
title : ' A Wonderland of Pagoda Legends'.)
1995 : Gift of Laughter
( on the picturesque speech of the people of Hla Daw,avillage in Central Burma,
selections of which have been published in the 'Pyinsa Rupa' magazine.)
During the last year of her life, debilitating and disfiguring arthritic pains made her spend most of her time in bed. Regarding her fight against the spasms of pain, she remarked. "Sometimes I lose, sometimes they win". Quite surprisingly, compared to what she suffered, she died in peace.
သူမဘဝ၏ နောက်ဆုံးနှစ်တွင် ဆိုးရွားပြင်းထန်သော အဆစ်အမြစ်ယောင်ရောဂါကြောင့် အချိန်တော်တော်များများ အိပ်ယာထဲတွင် ကုန်ဆုံးရသည်။ သူမခံစားရသော ကြွက်သားနာကျင်မှုကို တိုက်ပွဲဝင်ရင်း တခါတရံ 'ငါ ရှုံးတယ်၊ တခါတရံ သူတို့ နိုင်တယ်' ဟု မှတ်ချက်ချသည်။ သူမ ခံစားခဲ့ရသော ဝေဒနာများနှင့် နှိုင်းစာလျှင် အံ့အားသင့်စရာ ငြိမ်းချမ်းစွာ သူမ သေဆုံးခဲ့သည်။
Khin Myo Chit, Writer and Journalist,
born : 1, May 1915 , died : 2, January 1999,
only son, Dr. Khin Maung Win,
Retired Professor of Mathematics:
twin grand children:
boy-twin Maung Maung Win (a) Maung Yit,
girl-twin Mi Mi Win (a) Junior Win,
one great grand daughter, Pwint Phyu Nanda.
Dr. Khin Maung Win.
505/8 Pay Yeikhta,
Pyay Road, University P.O
သီတင်းကျွှတ်အခါသမယမို့သီတင်းကျွှတ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပို့ စ်ရေးချင်နေတာ ရေးစရာ ဘာမှထွက်မလာတာနဲ့ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့Flowers & Fesitvals စာအုပ်ထဲက သီတင်းကျွှတ်ပွဲတော်အကြောင်းကုို ကူးတင်လိုက်ပါတယ်။ ဆရာမကြီးရဲ့ မြေး ဂျူနီယာဝင်းက အဲဒီစာအုပ်ကို မြန်မာလိုပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ မဖတ်ရသေးပါ။ ဒီစာအုပ်အတွက် မူပိုင်ခွင့် ကျွန်မမှာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်မနှစ်သက်တဲ့ ဆရာမကြီးရဲ့ စာတွေကို သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ပြောပြ ရှယ်တဲ့သဘောပါ။ အင်္ဂလိပ်လို မဖတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် သိသလောက်လေး မြန်မာလို ပြန်ထားတာပါ။ ဘာသာပြန်တာ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိခဲ့ရင် ကျွန်မအားထုတ်မှု ပေါ့လျော့လို့ ပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်တာ ပိုရှင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်း အင်္ဂလိပ်လို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
၁၉၉၉ လှည်းတန်းက ဆရာဦးမြကြိုင်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းတက်တော့ စာဖတ်ချိန်၊ ဘာသာပြန်ချိန်တွေဆို ဆရာမကြီး စာအုပ်တွေ သင်ရပါတယ်။ Colorful Myanmar မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ ရာသီစာ စကားထာတွေအကြောင်းနဲ့အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသလို ကျွန်မ အနှစ်သက်ဆုံးစာအုပ်ပါ။ Flowers & Festivals ၁၂လ ရာသီ ပွဲတော်များအကြောင်း။ Wonderland Myanmar မြန်မာပြည်တဝှမ်းက တန်ခိုးကြီးဘုရားများ အကြောင်း။ ဆုရဝထ္ထုတို မူယာစုံလင် သူ့ ရုပ်သွင် Her Infinite Variety ရုပ်သေးဆရာတယောက်ရဲ့ဆွေးမြေ့ ဖွယ် ချစ်ဇာတ်လမ်း။
ဆရာမကြီးရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရာ masterpiece လို့ သတ်မှတ်ကြတာကတော့ King Among Men အနော်ရထာမင်း ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပထမမြန်မာပြည် တည်ထောင်တဲ့အကြောင်း။ ကျွန်မတုို့သိတဲ့ ကျန်စစ်သား၊ ငထွေးရူး၊ ငလုံးလက်ဖယ်၊ ညောင်ဦးဖီး သူရဲကောင်းလေးယောက်က အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ သက်ရှိလူသားတွေအဖြစ် အသက်ဝင်လို့ ၊ ကျွန်မတို့ သိတဲ့ ပန်းစားဘီလူးမ မယ်ဝဏ္ဏက အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာ အသားအရည်ရွှေရောင် တောထဲမှာပဲ နေထိုင်တဲ့ လူရိုင်းမလေး ဖြစ်လို့ ၊ ဗျတ်ဝိဗျတ္တ၊ ရှင်အရဟံနဲ့တွေဆုံပုံ၊ ဥသာပဲခူးတိုက်ပွဲ၊ ကျန်စစ်သားနဲ့ ဥသာပဲခူးမင်းသမီး ခင်ဦး၊ သုဝဏ္ဏဘူမိ သထုံပြည်ကို ချီတက်တိုက်ခို်က်တဲ့အကြောင်းကို သမိုင်းပညာရှင်တွေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေး သုသေတနပြုပြီးမှ ရေးထားတာပါတဲ့၊ မင်းကြီးမင်းလေး (ဗျတ္တနဲ့ မယ်ဝဏ္ဏ သားများ)၊ ကိုရင်မောင်နဲ့မယ်ဥ၊ ရှမ်းစော်ဘွားညီမ စောမွန်လှတို့ အကြောင်းနဲ့အရမ်းကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးပါ။
King Among Men ၊ Wonderland Myanmar စာအုပ်တွေကို မောင်မောင်နဲ့ မကြီး ဝယ်ပို့ ပေးပြီး Colourful Myanmar နဲ့Flowers & Festivals စာအုပ်တွေကတော့ အမေဇုန်က ဝယ်တာပါ။ ပို့ ခနဲ့ မှ ၂၀၊ ၃၀ လောက်ပဲ ကျပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို အရေးကောင်းသလို ဇာဝနညဏ်ရွှင်တဲ့ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်က ကျွန်မအနှစ်သက်ဆုံး စာရေးဆရာဖြစ်ပြီးတော့ ကြုံကြိုက်ရင် ဆရာမကြီးလက်ရာတွေကို ဖတ်ရှုဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ နောက်လာမဲ့ ပွဲတော်တွေကို အလျဉ်းသင့်သလို တင်သွားပါဦးမယ်။ အလည်လာတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ပျော်ရွှင်သော သီတင်းကျွှတ်လေး ဖြစ်ပါစေ။
အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၃။